आज नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, एकताका सबै काम टुंगो लाग्ने - Everest Dainik - News from Nepal
आज नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, एकताका सबै काम टुंगो लाग्ने
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ ।
पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन आजको बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
आजको बैठकले जिल्ला इन्चार्च र विभाग प्रमुखहरुको टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
नेकपामा जिल्ला कमिटिहरुको एकता सम्पन्न भएपनि केन्द्रीय र स्थायी समिति सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छैन ।
पोलिटब्यूरो र सम्पर्क मञ्चबाहेकका सबै एकताका कार्यभार आजको सचिवालय बैठकका एजेण्डा हुने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि, होला केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन?
सचिवालयको बैठक अघि पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र समूहले विभाग तथा इन्चार्जका लागि आफ्नो तयारी गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको जिम्मेवारीको टुंगो लगाइसकेको छ । दुबै समूहबीच स्कूल र प्रचार प्रसार विभागको नेतृत्वमा भने अझै सहमति जुटेको देखिन्न ।
३२ केन्द्रीय विभागमध्ये १८ पूर्व एमाले र १४ पूर्व माओवादीले लिने गरी भागवण्डाको सहमति भइसकेको छ। पूर्व माओवादीले पाएको भागवण्डामा छलफल गरी नाम तय गर्न बैठक बसेको ती नेताले बताए ।
पूर्व एमालेतर्फकाले बिहीबार साँझ, शुक्रबार र शनिबार आफ्नो पूर्ववत समूहमा छलफल गरेका थिए । पूर्व एमालेले पाएको संगठन विभागमा वामदेव गौतम, विदेशमा माधव नेपाल र नीति अध्ययनमा झलनाथ खनाललाई लैजाने सहमति भएको छ।
याे पनि पढ्नुस नेकपाको मासिक आम्दानी करोडौं, सदस्यता शुल्कबाट मात्रै साढे तीन करोड उठ्ने !
आजको बैठकले एकतामा सहमतिका अतिरिक्त सरकारको काम कारवाही र विप्लव समूहबारे समेत छलफल गर्न सक्ने बताइएको छ ।
ट्याग्स: nekapa, नेकपा, सचिवालय बैठक
अमेरिकामा फेरि बढे मृतक र संक्रमित